Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Kalmar län / Mönsterås
Mönsterås waa degmad xeebeed oo leh jasiiradooyin yaryar. Laagta yar ee biyood ee Alste iyo Em waxeey dhexmaraan degmada, taas oo abuureeyso bey’ad fiican oo dabiiciyeed.
941 kiilomitir oo laba jibaaran
Kalmar 46 kiilomitir
Växjö 125 kiilomitir
Karlskrona 130 kiilomitir
Degmada Mönsterås waxeey lee dahay jawiga-shirkadeed ee ugu fiican gobolka, ayadoo la raacaayo naaqshadeeynta gobolada iswiidhan uu sameeysay Ururka Shirkadaha Iswiidhan. Degmada waxeey lee dahay shan xaafada, xaafad kastona waxeey ku yaalo xanaanad caruureed iyo iskuul ee caruurta midba si gaar ah loo fiirsho baahidiisa iyo waxuu ka bixi karo. Safka loo galo xanaanada degmada Mönsterås waa mid gaaban, guriyaalna waa laga heli karaa qeeybo kala duwan ee degmada. Xariir-baseed oo fiican ayaa tago Kalmar iyo Oskarshamn, waxaana jiro bas si toos ah uu tago meel ee ka mid tahay Stockholm.
Shirkada guriyaasha la kireeysto ugu weeyn ee degmada Mönsterås waa Mönsterås Bostäder. Waa shirkad degmadeed. Mönsterås waxeey lee dahay, hadna maamushaa in ka badan 1350 guri oo ku yaalo degmada Mönsterås. Guriyaashaan waxeey ku yaaliin Fkuseryd, Ålem, Mönsterås, Timmarnabben iyo Blomstermåla.
Qaabilaada qaxootiga waxaan hormarinaa in aan soo bandhigno guriyaal ku yaalo dhexbartanka Mönsterpås si ee uu sahlanaato tegida dugsiga barashad afka, xanaanada caruurta iyo xafiiska shaqada.
Degmada Mönsterås waxaa ku yaalo ururo diinto masiixga iyo kaniisada Iswiidhan. Sido kale degmada waxaa joogo dad muslimiin ah.
Degmada Mönsterås waxeey qani ka tahay ururada oo ku jeedo qeeybo kala duwan.
Dugsiyada hoose waxeey ku yaalaan Ålem, Timmernabben, Fliseryd, Blomstermåla iyo Mönsterås. Midka dhexe waxuu ku yaalaa Blomstermåla iyo Mönsterås, dugsi sarena waxuu ku yaala Mönsterås.
Aragtideena: Mönsterås waa in shirkadlayda iyo dadka gaarka ah u arkaan gobolkan degmadiisa ugu soo jiidashada badan in laga shaqeeyo oo lagu noolaado. Shaqo-bixiyayaasha waaweyn ee gobolka waa Maamulka gobolka Kalmar oo isibtaalo ku leh Kalmar iyo Oskarshamn labadaba iyo rugga caafimaad oo ku hareersan gudaha degmadan. Scania (warshad baabuur) oo ku taala Oskarshamn ayaa ah shaqo-bixiyaha ugu weyn iyo Södra Cell AB (warshada dhirta duurka iyo alwaaxa). Degmada Mönsterås waa shaqo-bixiyaha ugu weyn ee degmadan lehna wax kasta laga bilaabo daryeelka iyo xanaanada ilaa xanaanada caruurta iyo iskoolka.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Mönsterås